डोजरले खन्ने क्रममा नालामा भेटिएको ६ किलो चाँदीको शिव मूर्ति चो’री
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ गगनगंजस्थित फोहोरको नाला खन्ने क्रममा भेटिएको शिव भगवानको चाँदीको मूर्ति हराएको छ। शिव भगवानको चाँदी जस्तो देखिने ६/७ किलोको मूर्ति फेला परेको थियो । मुर्ति चो’री गर्ने बाटो नभएको हुनाले रहस्यमय बनेको स्थानीयले बताएका छन् ।
राति १ बजेसम्म मुर्ति मन्दिरमै रहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार हर्क बहादुर गुरूङले बताएका छन् । अनुसन्धानका लागि पूजारी र केही स्थानीयलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालगञ्ज वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष जमुन खाँले डोजेरले खनेको नालामा ४ जना बालकले त्यो मूर्ती फेला पारेको बताएका थिए ।
मूर्ति कुन धातुबाट बनेको छ भनेर जाँच्नको लागि स्थानीय केही सुनारहरूलाई झिकाएर चेक गर्दा धेरैले मूर्ति चाँदीकै भएको भन्ने दाबी गरेको बताईएको थियो । मूर्ति फेला परेको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलगायत सबैलाई जानकारी गराईएको थियो ।